Ra'iisul Wasaare Saacid "Go'aan kasta oo Baarlamaanka gaaro anagoo maqan waa mid ku dhisan malo | Sagal Radio Services
"Eedaymaha mooshinka ku xusan ee lagu dhudhuminayo kalsoonida xukuumadda, ma aha kuwo xaqiiqda dhabtaa ku salaysan, Waxaa maqan xog-ogaalnimo rasmi ah"ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Saacid.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa isagoo ka duulayay go'aankii Xildhibaanada Baarlamaanka ku diideen inuu ku hor yimaado ayaa waxaa uu yiri " Si waafaqsan cadaaladda dabiicigaa (Natural Justice) iyo shuruucda dalkaba - waxaa xukuumaddu diyaarisay qoraal waafi ah ee ay uga jawaabayso dhamaan eedaymaha loo soo jeediyay, oo keeni kara qaneecaad iyo kalsooni dhisid buuxda".
Mr Saacid ayaa ka codsaday Golaha Baarlamaanka in mar labaad loo ogolaado lana siiyo fursad lagu dhageysto, si uu isugu difaaco eedeymaha loo soo jeediyay ee mooshinka ku xusan.
"Xukuumad ahaan waxaan golaha baarlamaanka ee sharafta leh mar labaad ka codsanaynaa in naloo ogolaado fursad nalagu dhagaysto si aan isaga difaacno eedaymaha naloo soo jeediyay"ayuu yiri Ra'iisul Wasaare.
Ra'iisul Wasaare Saacid ayaa sheegay in go'aan kasta oo Baarlamaanka gaaro, iyagoo maqan uu yahay mid ku dhisan malo awaal.
"Go'aan kasta oo la gaaro anagoo maqan waa mid ku dhisan malo awaal"ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay Ra'iisul Wasaaraha.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa diiday Ra'iisul Wasaaruhu ka soo qeyb galo fadhiga Baarlamaanka, iyadoo dood arrintaas ka dhalatay kadib Gudoonka uu cod u qaaday in Ra'iisul Wasaaruhu ka soo qeyb geli karo iyo in kale, waxaana diiday in aanu ka soo qeyb galay 140 xildhibaan.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ku adkeysanayay in aanay sharci aheyn in Ra'iisul Wasaaruhu uu hor yimaado Baarlamaanka, isla markaana si Maxkamad oo kale aanu is difaaci karin, iyagoo ku dooday in Mooshinka yahay mid kalsooni kala noqosho oo aan aheyn kalsooni soo weydiisasho.
Si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Saacid ayaa u muuqda mid waqtiga ugu dambeeya sii dagaalamaya, isla markaana aanay marnaba cabsi gelin guuxa ka soo yeeraya Xildhibaanada ka soo horjeeda oo dad badan aaminsanaayeen inay ku dhalin doonto inuu is casilo, maadaama aqlabiyad ahaan looga badan yahay Baarlamaanka.
Tags ay difaceyso in is oo saacid sheegay xukuumada